XOG & Xusuus Qaybta 2-Aad: Wax Ka Ogow Lixda Halyay Ee Kubbada Cagta Soo Maray Ee Aan Waligood Looga Yeedhin Xulalka Qaramadooda. - GOOL24.NET
XOG & Xusuus Qaybta 2-Aad: Wax Ka Ogow Lixda Halyay Ee Kubbada Cagta Soo Maray Ee Aan Waligood Looga Yeedhin Xulalka Qaramadooda.
November 18, 2018 Mahamoud Batalaale
Waxaanu hore idiinku balan qaadnay in waqtiga kulamada caalamiga ah lagu jiro aanu idiin soo gudbin doono warbixino faah faahsan oo aanu ugu magac darnay “Xog iyo xusuus” Kuwaas oo aanu ku falan qayn doono waxyaabo ay tahay in la ogaado ama wax laga xusuusto kuwaas oo kubbada cagta saamayn wayn ku soo yeeshay.
Haddaba qormadeena maanta waxaanu ku eegi doonaa lix ciyaartoy oo heer cajiib ah ka soo gaadhay kubbada cagta balse aan nasiib u yeelan in ay qayb ka noqdaan waajibaadkii xulalka qaramadooda iyada oo waliba ay kooxihii ay ka soo ciyaareen halyayo ka noqdeen.
Qodobo badan ayaa samayn ku yeesha in ciyaartoy looga yeedho waajibaadka xulka qarankiisa laakiin waxaa la ogyahay oo marag ma doon ah in ciyaartoy kastaaba u sharaf iyo wanaag u arko in uu ka soo muuqdo maaliyada xulka qarankiisa iyo sidii uu koobab ugula guulaysan lahaa.
Haddaba waa kuwee lixda halyay ee waayay sharaftii iyo karamaadii waajibaadka xulka qarankooda balse shaqada wayn u soo qabtay kooxihii ay ka soo ciyaareen?. Xogta iyo xusuusta maanta ayaad kaga bogan kartaa jawaabta su’aashan.
6- Carlo Cudicini (Italy)
Aan ku bilawnee Carlo Vudicini oo ka mid ahaa goolhayayaashii ugu fiicnaa ayaa ku fashilmay in uu yeedhmo ka helo xulka qarankiisii Talyaaniga. Carlo Cudicini ayaa shaxda kooxda kowaad ee Chelsea ka soo muuqday wuxuuna bilawgii qarnigan 21 aad wuxuuna kooxda ku soo qaatay sagaal sanadood isaga oo doorashada kowaad ka ahaa Stamford Bridge.
Laakiin goolhaye Carlo Cudicini ayaa booskiisii kooxda Chelsea u lumiyay Petr Cech sanadkii 2004 kii wuxuuna sanadkii 2009 kii ku biiray kooxda Tottenham.
Goolhaye Carlo Cudicini ayaa xili ciyaareedkii 2001/02 loogu codeeyay ciyaartoygii kooxda Chelsea ugu fiicnaa isaga oo door wayn ku lahaa horumarkii ay Chelsea waqtigaas gaadhay ee ka hor casrigii Abramovic isaga oo Blues u soo saftay in ka badan 141 kulan oo Premier league ah wuxuuna kula soo guulaystay laba koob.
Laakiin wax walba oo uu waayihiisa ciyaareed ee heerka kooxeed ahaa waxa uu awoodi waayay in uu ka soo muuqdo xulka qarankiisa Talyaaniga iyada lagu daray liiska halyayada aan helin yeedhmada xulalka qaramadooda.
Bogga 2-aad ilaa bogga 5-aad kaga bogo xogta oo dhamaystiran.